> Resource > Mac > Dhibaatooyinka Mac OS X Yosemite
Tan iyo Apple ay si rasmi ah la sii daayo Mac OS X 10,10 Yosemite on 17-Oct 2014, wax badan oo dadka isticmaala Mac lahaa updated in this X cusub OS taas oo uu leeyahay qaab ciyaareed fiican iyo xasilooni la mid ah sida Mavericks, iyo sidoo kale wax badan oo ka mid ah talooyin ku maqan weyn .
Laakiin dhab ahaantii dad badan oo isticmaala Mac la kulmay dhibaatooyin markii hagaajinta in Yosemite, ay ka dacwoodeen in Apple Dood iyo Twitter la #YosemiteProblems hashtag. Waxaan u ururiyaan qaar ka mid ah la is weydiiyo su'aalo Yosemite oo waxaad bixisaa xalal halkan. Haddii aad qorshaynaysid in la gaarsiiyo in Yosemite ugu dhakhsaha badan, tani waxay noqon kartaa a Yosemite FAQ waxtar u leh dhibaatooyinka aad kala kulantay intii lagu update ah.
Dhibaatada 1: La kulan fariin qalad ah "Tani waa shayga si ku meel gaar aheyn" marka la isku dayayo in la soo bixi X OS ka Yosemite
Xalka: Just riix Command + R inay dhaqaalo ka helo bogga Yosemite ee App Store ka dibna riix "Free" button, download Yosemite ku bilaaban doono.
Dhibaatada 2: xayiran ayaa rakibo OS X Yosemite la daqiiqo ka harsan
Xalka: Xalka u dhibaatadan waa cajiib fudud, iska sug. Inkastoo bar habka laga yaabaa xayiran dhawr daqiiqo ka harsan tahay, run ahaantii waxa ay weli u baahan kartaa dhowr saacadood oo lagu dhammaystiro sababta oo ah si weyn loo yaqiin ka mid ah waxay daliil u qaldan halka rakibidda X OS ka Yosemite. Sidaas bukaan guud ahaan iyagoo xallin karo dhibaatadan. Inkasta oo haddii aad dhabtii doonaysid in aad ogaato sida badan faylasha lagu soo guuriyeen, fadlan ku dhufatey L Command + si aad u eegto log rakibo.
Dhibaatada 3: Maxaad barnaamijyadooda aan uma shaqeeyaan in Yosemite?
Xalka: Sababtoo ah barnaamijyadooda qaar ka mid ah uma lihin Yosemite, waxaad u baahan tahay in aan bilowno Store App iyo update in version cusub.
Dhibaatada 4: My Wi-Fi oo aan shaqayn ama aan u muuqataa mid xasiloon ka dib markii la casriyeeyay si Yosemite, maxaan samayn karaa?
Xalka: Sida laga soo xigtay war celin ah oo ka mid ah dadka isticmaala Mac ee Apple Dood, isku day inaad damiso Bluetooth oo xal u heli karo dhibaatada Wi-Fi la dageen.
Dhibaatada 5: Fariinta baadi "Si aad u aragto content internetka, waxaad u baahan tahay si loo soo dajiyo Java Runtime deegaanka" hayaa gujisid xitaa ka dib markii lagu rakibay ugu dambeeyay ee Java 8 via edbinta tilmaamay "More Info ..."
Xalka: Just download saxda ah Java u OS X 2014-001 iyo dhibaatada la xallin lahaa.
Dhibaatada 6: Anigu ma heli karo feature handoff in Macbook Air ka dib markii la casriyeeyay si Yosemite, waxa socda?
Xalka: Hubi in qalab aad ka mid ah Mac daydo socda kuwaas oo taageeri feature handoff:
MacBook Air (badhtamihii 2012 iyo ka dib)
MacBook Pro (badhtamihii 2012 iyo ka dib)
(2012 dambe iyo ka dib) iMac
Mac mini (dabayaaqadii 2012-ka iyo ka dib)
Mac Pro (dabayaaqadii 2013)
Dhibaatada 7: Qaar ka mid ah files waxaa ii jooga lagu lumiyo in ka dib markii la casriyeeyay si Yosemite, bal sidee baan u dib u soo ceshano karaa?
Xalka: Haddii aad caado wanaagsan oo taageeray via Machine Time ah, waa ay fududahay in aad u hesho dib. Si kastaba ha ahaatee, haddii gurmad lama hor casriyaynta jidadku, inaad si fiican u baahan yihiin in ay soo kabsadaan xogta kuwa iyadoo la kaashanayo qalabka dhinac saddexaad .
Dhibaatada 8: My Mac Pro waddaa aad u gaabis ah ka dib markii la casriyeeyay si Yosemite, Waxaan jeclaan lahaa in aad hesho Mavericks hore dib, sida aan samayn karo in?
Xalka: Habka keliya ee waa in hoos Yosemite in Mavericks , halkan waa tutorial faahfaahin ah waxaad muujinaysaa sida ay u gaaraan in.
SourceTec Software: Sababta Mac
Da'da Rayaale II u Mac